Simona sy Angela - Mivavaha ho an'ny Papa - Countdown to the Kingdom
Zanak'i Zaro izahay	Angela	amin'ny 26 septambra 2020:
Androany tolakandro dia niseho niakanjo fotsy daholo i Neny; ilay akanjo nitafy manodidina azy dia miloko manga sy mazava be. Ilay akanjo lava io ihany koa dia nanarona ny lohany, satroboninahitra kintana roa ambin'ny folo no satroboninahiny. Nosokafan'i Neny ny sandriny ho mariky ny fandraisana. Tao amin'ny tanany ankavanana dia nisy sapile masina sy fotsy lava, toy ny tsy namboarina tamin'ny hazavana, izay nidina hatrany amin'ny tongony izay niboridana sy nipetraka tamin'izao tontolo izao, izay fahitana ny herisetra. Natsipin'i moramora moramora eran'izao tontolo izao ny akanjony.
Isaorana anie i Jesoa Kristy.
Ry zanaka malala, misaotra anao fa androany eto indray ianao any anaty ala voatahy. Anaka, tiako ianao, tiako be ianao, ary raha eto aho dia satria te hamonjy anao rehetra aho. Anaka, miandry anao ny fotoan-tsarotra, fotoan-tsarotra sy fangirifiriana fa aza matahotra. Ahinjiro amiko ny tananao, dia horaisiko ianao ka hitarika anao amin'ny lala-mahitsy. Aza manamafy ny fonareo: sokafy amiko ny fonareo. Misokatra ny foko; jereo, anaka…
Tamin'ity fotoana ity dia nasehon'i Neny tamiko ny fony nosatrohina tsilo ary nilaza tamiko izy hoe:
Voatsindrin'ny fanaintainana ny foko amin'ireo ankizy rehetra izay manasa ahy hanaraka ahy, saingy iza, indrisy, mitodika mankany amiko. Midira ato am-poko!
Nanomboka nandre ny fon'ny reniko nanomboka nikapoka mafy aho - dia mihalehibe hatrany.
Anaka, mitempo ny foko ho an'ny tsirairay avy aminareo, mitempo ho an'ny rehetra izany. Anaka, androany dia manasa anao indray aho hivavaka ho an'ny Fiangonana - tsy ho an'ny fiangonana manerantany ihany, fa ho an'ny fiangonana eo an-toerana ihany koa. Mivavaha, anaka, mivavaha. Anaka, raha mbola eto aho dia avy amin'ny famindrampon'Andriamanitra tsy manam-petra: isam-bolana(1) miaina fotoana fahasoavana ianao, izay tsy raisinao am-pifaliana foana. Anaka, azafady manohy mamorona vavaka Cenacles: manasa anao indray aho hivavaka amin'ny Rosary Masina any an-tranonareo. Miangavy, anaka, manosotra diloilo ny tranonareo.
Avy eo dia nandalo teo amin'ireo mpivahiny i Neny ary nanome tsodrano azy.
Amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
Zanak'i Zaro izahay	Simona	amin'ny 26 septambra 2020:
Nahita an'i Neny aho: niakanjo akanjo fotsy izy ary nisy fehin-kibo volamena teo amin'ny andilany, voaly fotsy marefo ary satro-boninahitra kintana roa ambin'ny folo teo an-dohany. Teo an-tsorony dia nisy akanjo fotsy nidina an-tongony, ary nitafy kiraro hoditra tsotra izy. Ny tongotr'i Neny dia nipetraka tamin'izao tontolo izao. Nosokafan'i Neny ny sandriny ho mariky ny fandraisana.
Anaka malalako, mahita anao eto amin'ny ala voatahy amin'ity andro malalako ity aho dia mameno fifaliana ny foko. Anaka, tonga taminareo tamin'ny alàlan'ny fitiavana lehibe an'ny Ray aho. Anaka, raha mba fantatrareo mantsy ny halehiben'ny fitiavan'ny Ray ho antsika tsirairay avy. Anaka, akaiky anao foana aho, miaraka aminao aho amin'ny fotoana rehetra iainanao; Tiako ianareo, anaka. Mivavaha, anaka, mivavaha. Anaka, mangataka aminareo indray aho ho an'ny vavaka ho an'ny Fiangonana malalako.
Raha nilaza izany izy, dia nalahelo ny endrik'i Neny ary nisy ranomaso nandriaka ny tavany.
Mivavaha, anaka, mba tsy ho tototry ny faharatsiana efa miparitaka ao anatiny izy [ny Fiangonana]. Mivavaha ho an'ireo zanako [pretra] malalako sy voafidy, mivavaha ho an'ny Ray Masina, Vicar of Christ. Miankina aminy ny fanapahan-kevitra lehibe: mivavaha mba hamenoin'ny Fanahy Masina azy ny fahasoavana sy ny tso-drano rehetra. Mivavaha, anaka, mba hanana toerana tsara kokoa ho an'ny olombelona ity ny tsara, ho an'ity sivilizansa izay tafalatsaka ao anaty fividianana mpanjifa ity, amin'ny fisehoana fa tsy hoe, amin'ny faniriana fa tsy manome, izay feno ny fitiavany azy manokana sy mandrakizay. lavitra an Andriamanitra. Tiako ianareo, anaka, eo akaikiko aho; mivavaha, anaka, mivavaha. Ankehitriny dia omeko anao ny fitahiako masina. Misaotra anao nanafaingana ahy.
Fanamarihan'ny mpandika: azo inoana fa natao ho an'ireo mpivahiny tonga nanatrika tao Zaro di Ischia tamin'ny faha-8 sy faha-26 isam-bolana.[↩]
Posted in Messages, Simona sy Angela.
← Nahoana Ankehitriny?
Luz de Maria - Manasivana ny varimbazaha →